MOOC waxay u heellan tahay daraasadda fikirka muhiimka ah. Caqabadaha kuwan danbe ayaa u go'aamin bulshooyinka casriga ah. Waxaan ku celinaynaa in aan la dagaalanno nacaybka, indho-shareerka iyo xitaa xagjirnimada. Laakiin qofku ma barto inuu ka fikiro, inuu dhaleeceeyo fikradaha la helay, si uu u aqbalo kaliya ka dib marka shaqada shakhsi ahaaneed ee fekerka iyo baaritaanka. Si aad u badan, oo ay wajahaan fududaynta, shirqoolka, mawduucyada Manichean, inta badan waxaa nalaga reebay kheyraadka sababtoo ah ma aanan baranin inaan ka fikirno oo aan ku doodno.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan inta badan dhayalsadaa dhibka u fikirka si xor ah iyo dhaliil. Tani waa sababta koorsadu u kobcin doonto si tartiib tartiib ah, iyada oo la xallinayo su'aalo badan oo ka sii adag. Marka hore, waxay noqon doontaa su'aal ku saabsan falanqaynta dhinacyada kala duwan ee fikirka muhiimka ah ee xiriirka ay la leedahay siyaasadda dareenka ballaaran ee ereyga. Kadib, marka fikradaha aasaasiga ah la helo, qaybo kooban oo taariikhda fikirka muhiimka ah ayaa la soo bandhigi doonaa. Waxaan markaas u gudbi doonaa si qoto dheer oo aan u falanqeyn doono mowduucyada sida hoose ugu xiran dhibka fikirka muhiimka ah: Cilmaaniyadda, awoodda doodda saxda ah, xorriyadda hadalka iyo cawaanta.
MOOC-da sidaas darteed waxay leedahay shaqo labanlaab ah: helitaanka aqoonta qaarkood ee lagama maarmaanka u ah in si buuxda loo fahmo caqabadaha fekerka muhiimka ah, iyo martiqaad uu naftiisa ugu fikiro adduun adag.
Samee fikirka muhiimka ah Diisambar 8, 2021Tranquillus
READ Ganacsi otomaatig ah oo internetka ah oo loogu mahadcelinayo System.IO
horeLaga soo bilaabo maamulaha isku-dhafka ilaa hoggaamiyaha cusub
socdaSharciga shaqada ee Yurub